Bahamas dia manendry an'i I. Chester Cooper ho minisitry ny fizahantany vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Bahamas » Bahamas dia manendry an'i I. Chester Cooper ho minisitry ny fizahantany vaovao
Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • People • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Minisitry ny fizahan-tany sy ny fiaramanidina Bahamas vaovao
Ny mpitantana sy ny mpiasa ao amin'ny Minisiteran'ny fizahantany sy fiaramanidina any Bahamas dia miarahaba fatratra ny praiminisitra lefitra, I Honorary I. Chester Cooper, izay notendrena ho minisitry ny fizahantany, famatsiam-bola ary fiaramanidina tamin'ny 17 septambra, iray andro taorian'ny fifidianana ankapobeny. Ny fanendrena ny kabinetran'i DPM Cooper dia anisan'ny portfolio voalohany notendren'ny fitantanana vaovao an'ny Progressive Liberal Party, izay nitondra ny fandresena tamin'ny fifidianana tamin'ny 16 septambra 2021.
Ny tontolon'ny asa aman-draharaha iraisam-pirenena dia manakiana mafy ny fanitarana maharitra ny sehatry ny fizahan-tany, sidina ary fampiasam-bola ao Bahamas.
Ny herin'ny minisitra Cooper sy ny fahaizany miasa mafy dia tena ilaina tokoa satria manohy manetsika ny famerenana ny fizahantany ny Minisitra.
Andriamatoa Cooper dia mandray ny lohany amin'ny fanentanana mafy momba ny lahasa goavana miandry azy.
Ny talen'ny fizahantany jeneraly Joy Jibrilu dia nanambara: "Izahay ao amin'ny Minisiteran'ny fizahantany dia manantena am-pientanentanana hiasa eo ambany fitarihan'ny Minisitra Cooper vaovao, izay hitondra ny fahalalana sy ny traikefa azony tamin'ny Minisiterantsika nandritra ny androm-piainany tamin'ny fahombiazany. mpitarika amin'ny sehatra tsy miankina. Ny herin'ny minisitra Cooper sy ny fahaizany miasa mafy dia tena ilaina tokoa satria ny minisiterantsika dia manohy manosika mankany amin'ny fanarenana fizahan-tany ao anatin'ny areti-mandringana. "
Ny minisitra Cooper dia nanaiky fa ny asa lehibe rehetra ao Ny Bahamas tarihin'ny vondrona iraisam-pirenena ary ny fahatakarana ny tontolon'ny asa aman-draharaha iraisam-pirenena dia manakiana mafy ny fanitarana maharitra ny fizahan-tany The Bahamas ', Sehatra fiaramanidina sy fampiasam-bola. Amin'ny maha-olona iray izay nahavita fahombiazana lehibe tamin'ny fitarihana sehatra tsy miankina, Andriamatoa Cooper dia nandray an-tanana ny asan'ny firenena voalohany miaraka amin'ny fahatsiarovan-tena momba ny asa goavana miandry azy. Mahafinaritra azy ny miatrika ny fanamby amin'ny fanompoana ny firenena malalany.
Ny minisitra Cooper no zandriny indrindra amin'ny 12 taona ary manambady an'i Cecelia Cooper. Izy ireo dia ray aman-dreny miavonavona manan-janaka telo.
Ny tolona nataony taloha dia nanosika azy ho be herim-po, hatanjaka ary hanetry tena; kalitao izay nanompo azy tsara rehefa nihanika ny tohatra fiasan'ny orinasa izy mba ho lasa Lehiben'ny & CEO an'ny BAF Global Group ary filoha & CEO an'ny BAF Financial & Insurance (Bahamas) Ltd.
Izy no talen'ny komity mpanolotsaina fiantohana ary talen'ny mpanorina ny Tahirim-bola Bahamas Venture. Izy dia mpikambana ao amin'ny Young Presidents Organization (YPO), Distinguished Toastmaster ary miasa amin'ny Birao an'ny sehatra tsy miankina isan-karazany.
Ny praiminisitra lefitra Chester Cooper dia ny lefitry ny antoko liberal Progressive Party (PLP) ary ny solombavambahoakan'ny fanjakan'ny Exumas sy ny Nosy Ragged.